Hei DAN: Sei Izwi reCRM Rinogona Kusimbisa Hukama Hwako Hwekutengesa uye Kuchengeta Iwe Wakachena | Martech Zone
Kune misangano yakawandisa yekurongedza muzuva rako uye kwete nguva yakakwana yekurekodha iwo akakosha ekubata mapoinzi. Kunyangwe pre-denda, zvikwata zvekutengesa uye zvekushambadzira zvaiwanzoita misangano yekunze inopfuura 9 pazuva uye ikozvino ine kure uye hybrid yekushanda yekurara kwenguva yakareba, mavhoriyamu emusangano ari kuwedzera. Kuchengeta rekodhi chaiyo yemisangano iyi kuve nechokwadi chekuti hukama hunosimudzirwa uye yakakosha data data haina kurasika yave inotyisa uye inopedza nguva basa, uye ndipo apo izwi kune CRM mhinduro dzinogona kukutengera iwe nguva, kutsigira kutungamira chizvarwa uye kuchengetedza simba rako.
Hei DAN Inzwi kune CRM Mubatsiri
Izwi kune CRM mubatsiri Hey DAN inonyora misangano uye inoisa ruzivo rwekusangana uye kusangana nekutora-mutsetse muCRM dhatabhesi. A Fortune 500 anofarira, uyu mubatsiri wezwi anoshanda nechero CRM, kusanganisira Salesforce, MS Dynamics, uye Hubspot. Inovandudza kutorwa kweCRM, inowedzera mhando yedata nepamusoro pe200%, uye inopa avhareji ye4-6 maawa pasvondo yekuwedzera nguva yekutengesa. Nechinangwa chekuvandudza ruzivo rwevatengi uye kubvisa mutoro wekutonga, ine mashandiro eapp uye yakaomesesa chengetedzo protocol kutora pakarepo manotsi emusangano, makadhi ebhizinesi, kuronga zvekutevera uye kugadzirisa mari.
Izwi Rinogona Sei kuCRM Kurongeka paHey DAN Tsigira Lead Generation?
Kuve nechokwadi chekuti kutevera kunoitwa kumunhu akakodzera panguva yakakodzera uye zvikwata zvekutengesa zvakashongedzerwa nehuchenjeri hwemashure, chinhu chakakosha chekubudirira kwekutengesa zano. Hey DANTsvagiridzo inoratidza kuti kana mumiriri wekutengesa akamirira zuva rimwe chete asati apinda mumanotsi emusangano muCRM system, anosvika makumi mana muzana ezvekubatanidzwa ikoko anorasika. Kupa simba zvikwata zvekutengesa kuita izvo zvavanoita zvakanyanya, kuvaka nekusimbisa hukama hunobatsira, kwakaringana uye panguva yakakodzera CRM data yekupinda kwakakosha. Izwi kuCRM software inopa mhinduro nekukurumidza.
Mumakore gumi adarika, masevhisi ekunyorwa kwemisangano yeCRM dhatabhesi akatama kubva pane zvakazara vanhu mashandiro akananga kune marobhoti vabatsiri. Sezvineiwo, kunyangwe iri nyowani kumutambo, mabhoti aya anokwanisawo kunakidza mareti echokwadi.
Isu takaona izwi kuCRM kunyatsoita zvakanaka mumakore mashoma apfuura, nemitengo yekukanganisa ichidzika kubva pa19% muna 2019 kusvika 12% muna 2021. Izwi kuCRM mhinduro dziri kuvandudza maalgorithms uye timu yedu yekunyora inopa imwe cheki ive nechokwadi chekuti zvikanganiso zvekuburitsa zvinodzikiswa kusvika pa1% - iyi musanganiswa ine simba ndosaka makambani eFortune 500 achivimba nesu. Kuroora tekinoroji nevanhu ndiyo chiyero chakakwana pakati pekuita zvakanaka nekuigadzirisa.
Kate Zeid, Kukura & Kushanda SVP paHey Dan
Nguva yese iyi kuchengetedza uye kutorwa kwedata kwakaringana kunogona kushandiswa kupenda mufananidzo wakajeka wetarisiro uye kushongedza zvikwata zvekutengesa kutora nzira yakazara yekuvhara chibvumirano. Data ine simba inogona kutungamira kune zvemashiripiti kubatana, sekuziva ruzivo asymmetry pakati pezvinoda kudzidza mutengi uye izvo boka rekutengesa rinoziva nezvechigadzirwa. Inogona kugonesa zvikwata kuona kuti inodziya sei kutungamira uye kuitazve panguva yakakodzera uye nenzira yakanaka. Kuongororwa kwedata pachiyero kunogona zvakare kutungamira mukuona zvinodiwa nevatengi maitiro uye kuzivisa iyo inotevera kutenderera kwechigadzirwa kana sevhisi kusimudzira.
Kuvaka Sales Team Kuenderera mberi
Sales team attrition inogona kunetsa, mumaindasitiri mazhinji ekutengesa mushandi wekugara anogona kunge ari pasi pemakore maviri. Padivi pekutonga musoro wekutsvaga anotsiva mutambi akasimba, inhamo yekurasikirwa nehukama hwevatengi hwavakavaka nekufamba kwenguva uye mutengo ungangove wekurasikirwa nebhizinesi ravo.
Kurangarira kwakaringana uye kwakadzama data yemusangano ndiyo kiyi yekuronga kutevedzana. Nekuona kuti ruzivo rwemusangano wevatengi, kubva kune vangangove nhamba dzezvibvumirano zvakabvumiranwa pamusoro peZoom kurangarira kukorokotedza muvambi pamusi webhizinesi, zvinoiswa pasi ipapo uye zvakajeka muCRM dhatabhesi wakabudirira kuchengetedza ramangwana rehukama ihwohwo.
At Hey DAN izwi redu kune CRM software rakanyora pamusoro pemisangano miriyoni imwe, inomiririra anopfuura 1 maminetsi ekuteerera. Kupa ndangariro yesangano nekuendesa smart data kune ese Fortune 620,000 zvikwata zvekutengesa uye zvidiki zvekupfeka zvebhizinesi, inovimbisa kuenderera kwehukama uye pakupedzisira inofambisa kutengesa.
Zvinosimbisa CRM inoenderana software, Hey DAN, inogona kudzikisira kupera kwenguva yekurangarira nezvemisangano yakawanda yakaitika mukati mezuva rakabatikana. Zvinokurudzirawo kuti izwi iri kubuda kune CRM tekinoroji iri kuramba ichivandudza pane yayo inoshamisa yechokwadi rekodhi rekodhi, sezvo algorithms inoramba ichivhara mukaha pakati pekurangarira kwevanhu uye kugona bot.
Book Your Hey DAN Demo Nhasi
Tags: CRMhubspotHub Spot CRMHubspot kubatanidzwakusanganamutungamiri wechizvarwams dynamicsms dynamics kubatanidzwakugadzirisa mutauro mutauronlpzvikwata zvekutengesavatengesi crmvatengesi vanobatanidzwainzwi kune crmkunyorwa kwezwi